बेल्जियम समूह विजेता बन्दै अन्तिम १६ प्रवेश, नकआउटमा कोसँग खेल्छ? | सबै खेल
बेल्जियम समूह विजेता बन्दै अन्तिम १६ प्रवेश, नकआउटमा कोसँग खेल्छ?
८ असार २०७८, मंगलवार १०:५०
विश्व वरीयताको नम्बर एक राष्ट्र तथा जारी युरोकप २०२० को दाबेदार टिम बेल्जियम समूह ‘बी’को समूह विजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा फिनल्यान्डलाई २–० ले पराजित गर्दै बेल्जियमले अन्तिम १६ मा स्थान पक्का गरेको हो।
पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिँदा बेल्जियमले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। ७४औं मिनेटमा लुकास रेडेकीले आत्मघाती गोल गरेपछि बेल्जियमले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। केभिन डे ब्रुनले प्रहार गरेको कर्नर बेल्जियमका डिफेन्डर भर्मालेनले हेडिङ गरेपछि गोलपोस्टमा लागेर फर्किएको बल फिनल्यान्डका गोलकिपर रेडेकीको हातमा ठोक्किएर आत्मघाती गोल लागेको थियो।
यस्तै, रोमेलु लुकाकुले ८१औं मिनेटमा अर्को गोल थप्दै बेल्जियमको अग्रता दोब्बर बनाएका थिए। डे ब्रुनको सटिक पासमा लुकाकुले गोल गरेका थिए। यसअघि ६६औं मिनेटमा पनि लुकाकुले गोल गरेका थिए। तर, भारले अफसाइड मान्यता दिँदै उनको सो गोल खारेज गरेको थियो।
जितसँगै ३ खेलमा ९ अंकका साथ बेल्जियम नकआउट प्रवेश गर्न सफल भएको छ। फिनल्यान्डले भने ३ खेलमा ३ अंक जोडेका छ। बेल्जियम बाहेक समूह बीका सबै टिमको कुल अंक ३ नै छ । तर, ३ अंक नै जोडेको डेनमार्क गोलअन्तरका आधारमा दोस्रो हुँदै नकआउट प्रवेश गर्दा फिनल्यान्डको भने सम्भावना न्यून नै छ। यस्तै समान ३ अंक नै जोडेको रुस भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ।
बेल्जियमले २८ जुनमा नकआउट चरणको खेल खेल्दैछ। उसको विपक्षी टिमको भने टुंगो लागेको छैन। उसले समूह ए, डी, ई वा एफ बाट तेस्रो स्थानमा रहँदै नकआउट प्रवेश गरेको टिमसँग क्वार्टरफाइनल प्रवेशका लागि भिँड्नेछ।
Tags: belgium, de bruyne, euro 2020
रुसमाथि डेनमार्कको सानदार जित, समूहमा दोस्रो हुँदै नकआट चरणमा
बेल्जियम र फिनल्यान्डबीच खेल हुँदाहुँदै अर्धनग्न युवती मैदानमा छिरेपछि…